Ao Makedonia Avaratra, misy tanora sasantsasany nahavita nanangana orinasa mahomby nandritra ny valanaretina Covid-19 · Global Voices teny Malagasy
Manentana ny fanahin'ny fandraharahàna ananan'ny tanora Makedoniàna ny valanaretina
Voadika ny 25 Avrily 2022 3:45 GMT
Darko Milevski, Teona Mango ary Goran Bakrevski. Sary an'ny Meta.mk, nahazoana alàlana
Ity tantara ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny Meta.mk, tafiditra ao anatin'ny fandrakofany tsy tapaka ireo olana mifandraika amin'ny Generation Z. Dika nasiana fanovàna no naverina navoaka etoana, eo ambanin'ny fifanarahan'ny Global Voices sy ny Metamorphosis Foundation hifampizara votoaty.
Nandritra ny olan'ny valanaretina coronavirus, nahita hirika ny tanora sasantsasany mba hananganana ny orinasany manokana, na nampifanaraka ny orinasany efa mitsangana amin'ny zavamisy vaovao napetrak'ireo fepetra tsy maintsy arahana hiadiana amin'ny coronavirus.
Zotra mifanohitra amin'ny noraisin'ny maro io, izay manohana ny tsy firaharahiana sy ny fifindràmonina ho toy ny vahaolana amin'ny hirika ara-toekarena amin'ny farany ambany ao Makedonia Avaratra, indrindra fa ivelan'i Skopje renivohitra (izay miasa ho toy ny tsena lehibe indrindra ao an-toerana manome ny zavatra ilain'ny mpanjifa). Ny fanadihadiana momba ny tsy fahampian'ny asa ho an'ny tanora, nataon'ny ONG Finance Think dia milaza fa 49 isanjato, efa nila ho avo roa heny tamin'ny salanisa manerana ny firenena izay teo amin'ny 25 isanjato teo ny tahan'ny tsy fananan'ny tanora asa tamin'ny 2015. Nasehon'ny fanadihadiana iray tamin'ny 2019 fa 52 isanjaton'ny tanora no nieritreritra handao ny firenena mba hitady fiainana tsaratsara kokoa. Araka ireo angondrakitra avy amin'ny Eurostat ho an'ny taona 2020, tafidina ho 16 isanjato ny taha faoben'ny tsy fananana asa, raha mbola nijanona ho avo be ihany kosa, 29,5 isanjato, ny tsy fananan'ny tanora asa.
Asehon'ireo fanadihadiana marobe nataon'ny Finance Think tena nanohintohina mafy ny fepetran'ny tsenan'ny asa ny fisian'ny valanaretina COVID-19, satria ireo fihibohana, ny fikatonan'ny sisintany ary ny fameperana ny fivezivezena dia nandrai anjara avokoa tamin'ny fihenan'ny asa, tamin'ny fahatapahan'ny rojom-pamatsiana, ny famokarana ary ny famarotana.
Ireo tantara ao amin'ny Meta.mk, notantarain'i Teona Mango, Goran Bakrevski ary Darko Milevski, mpandraharaha avy ao Bitola, tanàna iray any atsimon'ny firenena, dia manome ohatra momba amin'ireo tanora niatrika ilay krizy tamin'ny fomba feno famoronana sy miabo.
Teona Mango, mpanorina ny marka Beyond Green. Sary an'ny Meta.mk, fampiasàna nahazoana alàlana.
Teona Mango, bilaogera, no mpanorina ny Beyond Green, marika lamaody manaja ny tontollo iainana sy maharitra, niorina tamin'ny 2020. Ireo vokatra avy ao amin'ny Beyond Green dia vokarina avy amin'ny akora ekôlôjika sy maharitra, ary ny hevitra nentina nanorina azy dia ny hampiroborobo fomba fiaina maitso sy miaro ny tontolo ianana, no sady mampihena ihany ny famokarana sy fampiasàna ireo vokatra mandoto ny tontolo iainana.
Nambaran'i Mango fa nanova ihany ny koa ny fahazarany rehefa miantsena ny fisian'ilay valanaretina:
Tany Londona aho no nipetraka hatramin'ny 2020 ary rehefa nanomboka ny krizin'ny valanaretina, niverina teto aho dia tavela teto nandritra ny taona iray, tamin'ny fomba tsy noeritreretina. Nandritra ny fihibohana, toy ny olona rehetra, be loatra ny fotoana nipetrapetrahako fotsiny. Tamin'ny fiverenako, voamariko ny tsy dia fisian'ny fahatsiarovantena miahy tontolo iainana sy ny tsy fisian'ny vokatr ekôlôjika maharitra. Dia izay no nampitsiry ny hevitra hanomboka marika iray miaro tontolo iainana sy maharitra. Ny fotoana fanampiny nananako dia nanome ahy ny habaka hikarohana sy hitadiavana izay vokatra sy akora tsara indrindra sy maharitra indrindra.
“Tao amin'ny aterineto no nanomboka niantsena ny olona fa tsy teny amin'ny magazay loatra. Sady koa, ireo vokatra rehetra novidiako dia nalaina avokoa tamn'ireo toeram-pivarotana ety anaty tambajotra », hoy ny fanazavàn'i Mango.
Goran Bakrevski dia manao asana mpitsabo nify, saingy io asa io dia anisan'ireo voalohany tena voadona mafy tokoa tamin'ny fisan'ny valanaretina COVID-19. Nambarany fa nandritra ireo volana telo voalohany nisian'ny valanaretina, tena tsy nisy asa mihitsy izy, ka nahafahany nanana fotoana ampy natokany tamin'ny famokarana ny labiera BAK, asan'ny tànany , izay « 100 % natoraly. »
Nanazava i Bakrevski :
Goran Bakrevski, mpamokatr ny labiera BAK, asan'ny tànany. Sary an'i Meta.mk, fampiasàna nahazoana alàlana
Efa talohan'ny krizin'ny COVID-19, vinavinanay ny hitrandraka toerana fanaovana labiera, tantanan'ny fianakaviana, saingy avy eo nohafainganinay izay asa izay, saria nànana fotoana lavabe nalalaka izahay. Mpampianatra mozika ny rahalahiko, mazava ho azy fa tao an-trano koa izany izy. Nandritra io vanim-potoana io, niasa fatratra momba ireo hanitra ho an'nay labiera izahay, ary ny fanatsaràna ny teknôlôjian'ny famokarana. Tsy nivoaka ny olona, nijanona an-trano, ka hita fa fotoana tsara iray fanararaotra mba hanandràmana ny tsiron'ireo vokatra. Tamin'izany àry no n ahazoany ny tohana avy amin'ireo mponina ao Bitola. Tamn'izany fotoana izany, nandany betsaka tamin'ny fotoanan-dry zareo tao amin'ny tambajotra sôsialy ny tanora, ary dia nanao dokambarotra tsy nivantana ho an'ireo vokatray izahay tamin'io vanimpotoana io.
Darko Milevski dia mpilalao baolina kitra fahiny, ary dia nofehezin'ny asa nataony hatrany ny fomba fisakafony. Nipetraka tany Soeda izy, sangy niverina ho ao Bitola, toerana nanokafany ny Centar, telo taona lasa izay, toerana iray fisakafoanana ho an'ireo “vegetarian” sy “vegan”. Ny hanentana ny tanora hanana fomba fisakafo ara-pahasalamàna no tanjony tamin'izany, nefa koa hampianatra azy ireny hiverina an-doharano, izany hoe, hampiditra bebe kokoa ny sakafo avy amin'ny zavamaniry ho ao anatin'ny foto-tsakafon-dry zareo.
Darko Milevski, tompo'ny 21/10 Fast & Healthy. Sary an'ny Meta.mk, fampiasàna nahazoana alàlana
Rehefa nanomboka ny krizn'ny valanaretina coronavirus, marobe ireo fahasahiranana nitranga ary nihiboka nandritra ny dimy volana izahay. Tafavoaka velona tamin'ny 2020 izahay, saingy tamin'ny 2021, tena zavadehibe ny fanohizana. Nisafidy ny hampihena ny fahafahana manao izahay, nefa koa nanohy niroso hatrany tamin'ny hery rehetra. Niova anarana izahay araka izany, ary anorina ny 21/10 Fast & Healthy, orinasa iray manome tolotra sakafo ara-pahasalamàna vita malaky sy azo entina. Tamin'ny May izahay no nanomboka, nefa tamin'izany mbola nisy ireo fepetra. Saingy na nandritra ireny fameperana ireny aza, niasa izahay, saitria ny hany zavatra tsy maintsy nosahaninay dia ny lakozy.
Tsipihany fa ny krizin'ny coronavirus dia nanosika azy ireo tamin'ny fomba tsara mba hitondra fiovàna vitsivitsy, saitria, araka ny nolazainy, somary niborerarera isika ary nianatra ny hihetsika tao anatin'ny faritra nampahazo aina antsika, araka izany, iny krizy iny dia tsy nanao aga-tsy ny nanosika ny ezaka nataontsika. Nahafa-po an'i Milevski ny fihetsik'ireo mponina ao Bitola ary manantena ny hanitatra ny marika vokariny ho any amin'ireo tanàna hafa.
« Mikaroka ireo fomba hahafahany misakafo ny tanora, ary manova tsikelikely ny fomba fisakafoanana mahazatra azy », hoy i M. Milevski mamintina.